Haweenka uurka leh oo looga digey talaalka shirkada Modeerna samayso ee Karoona - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Haweenka uurka leh oo looga digey talaalka shirkada Modeerna samayso ee Karoona
Ururka caafimaadka aduunka ayaa soo saaray talo bixin ku saabsan talaalka hargabka Karoona ee ay samayso shirkada Modeerna. Sirkadan ayaa ka mida kuwa ururka caafimaadku u ogolaadey in daawadeeda dadka lagu talaalo.
Talo bixin ururku soo saaray ayuu ku sheegay in haweenka uurka leh ayna qaadan talaalka shirkadaas Modeerna (Moderna) ilaa ay yihiin kuwo ku jira safka hore sida dhaqaatiirta ama kalkaalisada iyo wixii la mida ee iyagu markasta qaadi kara hargabka.
Ururka caafimaadku wuxuu leeyahay ayadoo haweenka uurka leh ay markii horeba u nugulyihiin xanuunada kale haddana waa inay ka fogaadaan talaalkan ilaa ay yihiin kuwa kor ku xusan.
Ururka ayaa leh waxa loo baahan yahay baaritaan dheeraada si loo xaqiijiyo in daawadani saafi u tahay haweenka uurka leh. Talaalada hadda jira ayaa badankoodu ah kuwo sahlaya in qofku aanu isbitaal u gelin hargabka Karoona laakiin kama hortagayo inuu ku dhaco.